Mpanamboatra Inventory vokatra - Mpamatsy ny orinasa Inventory vokatra any Shina
Ny Stone Carving dia dingana iray amin'ny fanadiovana sy famaritana marbra voajanahary marokoroko amin'ny lamina na endrika kanto. Raha ampitahaina amin'ireo sombin-3D vy tsy misy fangarony na 3D hafa vita amin'ny seramika, vera, plastika sns. Nandritra ny taona maro nanangonana teknikan'ny asa tanana nanambatra ny fandrosoana farany tamin'ny teknolojia CNC, ny vokatra vato Carvings dia mampiseho ny mahasarika azy maoderina sy ny glamorany fahagola fara tampony.
Marble Inlay dia nanitatra ny hakanton'ny vokatra marbra. Mba hanaovana sombin-javatra vita amin'ny marbra inlay tsara indrindra dia mila ekipa manana endrika avo lenta amin'ny famolavolana sy ny fivarotana entana isika, ity no dingana voalohany nefa manan-danja. Ny ekipanay voaofana tsara sy za-draharaha dia miantoka fa tsy manafatra angona avy amin'ny mpanjifa fotsiny izahay, fa manana ny fahaizan'ny famolavolana ihany koa, ary mandritra izany fotoana izany dia manome sary miorina amin'ny famolavolana hahazoana fitambarana loko tsara indrindra sy mampitombo ny fivarotana mba hahazoana antoka fa antenaina sy vokatra be pitsiny. Ny teboka manan-danja faharoa dia ny masinin-jet-jet CNC. Ny milina avo lenta sy voakarakara tsara dia tsy misy isalasalana fa ny fotony mafy ho an'ny vokatra tsara sy malama. Fahatelo, ny mpandraharaha ho an'ny jet-jet an'ny CNC dia nianatra tsara tsy ny fomba fanodikodinana ireo masinina ihany, fa koa ny mampiavaka azy ireo karazana vato. Ireo mpandraharaha tompon'andraikitra ireo, miaraka amin'ny fahatsiarovan-tena tsara sy fahatakarana ny asa nanirahana azy ireo no lehilahy manan-danja amin'ny vokatra lavorary. Ho an'ny inlay marbra, safidin'ny vato isa isa, isaky ny milimetre isaina amin'ny valiny farany.
Ny mozika marbra dia azo jerena indray arivo taona lasa izay teo amin'ny tantaran'ny haingon-trano. Ny asany dia ny fanitarana ny fisainan'olombelona. Mety ho maivamaivana toy ny zazavavy izy; mety ho kilasika tahaka ny vanim-potoanan'ny Tany; ary mety ho marefo toy ny sary hosodoko Da Vinci io. Mandehandeha hatramin'ny vanim-potoana taloha ka hatramin'ny vanim-potoana maoderina, mandalo ny lovan'ny kolontsaina sy ny fanahin'ny olombelona izy io, ary amin'izao fotoana izao dia mbola iray amin'ny vokatra ankafizin'ny mpamorona sy ny mpampiasa farany.
Ny Stone Carving dia dingan'ny fanadiovana sy famaritana marbra voajanahary marokoroko amin'ny endrika haingo sy zavakanto. Raha ampitahaina amin'ireo sombin-javatra 3D vy tsy misy fangarony na singa 3D hafa vita amin'ny seramika, vera, plastika sns. Miaraka amin'ny arivo taona ny fanangonana teknikan'ny asa tanana manambatra ny fandrosoana ara-teknolojia, ny vokatra vato Carvings dia manambara ny fisarihana maoderina azy sy ny famirapiratany fahagola tampony.